छोरी उत्तर लेख्‍ने, बाबु मिलाइदिने ! – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
काठमाडौँ । कर्णाली शाही (परिवर्तिन नाम) नेपाल वायुसेवा निगमको सहायक चौथो तहको परीक्षा दिन २०७६ जेठ ११ मा परीक्षा केन्द्र पुगिन् । वस्तुगत परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा सबै प्रश्नको उत्तर अंग्रेजी ‘सी’ लेखिन् र बाहिर निस्किइन् । उनलाई सबै प्रश्नको उत्तर ‘सी’ लेख्न उनकै बुबा मिमबहादुर शाहीले सल्लाह दिएका थिए । पछि ती सबै उत्तर मिलेको भेटियो ।
छानबिनपछि आयोगले अधिकृत मिमबहादुरलाई ५ वर्ष ग्रेड र बढुवा पनि रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ । घटनाकै कारण आयोगले फेरि लिखित परीक्षा लिएकाले गत मंसिरमा प्रकाशित हुनुपर्ने नतिजा माघमा मात्रै निकालेको थियो । त्यसपछिका ६ महिनासम्म पनि आयोगले किन विवरण गोप्य राख्यो ? आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले बेलैमा घटनाबारे थाहा भएर अरू प्रतिस्पर्धीलाई असर नपरेकाले घटना सार्वजनिक नभएको बताए । ‘तहतहको छानबिन सकिएर निचोड निकालेर त्यसका आधारमा थप केही निर्णय हुन्छ होला,’ सुवेदीले भने, ‘निर्णय भएपछि आयोगले सार्वजनिक गर्छ । छानबिन नै नटुंगिँदै यसो भयो, उसो भयो भन्ने कुरा पनि त भएन ।’ उनले नतिजा आउनुअघि नै आन्तरिक निगरानीले गलत काम नियन्त्रण भइसकेकाले थप क्षति नभएको बताए ।
छोरीको प्राप्तांकमा जिज्ञासा राख्दा शाहीले ५० मा ५० नल्याएको दाबी गरे । उत्तरपुस्तिका फेरबदलमा पनि आफ्नो भूमिका नभएको बताए । ‘लोक सेवाको कर्मचारी आफ्नो मान्छेको जाँचमा कहाँ बस्छ र, बस्दैन नि,’ उनले भने । त्यसो भए किन छानबिन भइरहेको त भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘अब छानबिन नै गर्ने भनेपछि हुन्छ भनेर म यता आएको हो । त्यस्तो केही गडबड होइन, कसले तपाईंलाई गलत सूचना दियो ।’